चा'यालाई सखा'प पार्छ का'गती अनि जी'राले तर यसरी प्र'योग गर्नु पर्छ - HPsanchar.com
चा’यालाई सखा’प पार्छ का’गती अनि जी’राले तर यसरी प्र’योग गर्नु पर्छ
November 21, 2020 biplov adhikari खानपान 0
सरसफाइ पनि चा’याको कारक हो । सरसफाइमा ध्यान नदिने मानिसमा चा’या पर्ने सम्भावना हुन्छ । कपाल कम नुहाउने बानीले पनि चा’या पर्न सक्छ । शरीरमा हुने ह’र्मोन परिवर्तन, वंशाणुगत गुण, टाउकोमा विभिन्न रोग, अस्व’स्थकर खानपान, कपालमा केमिकलको प्रयोगजस्ता कारणले पनि चा’या पर्छ । त्यस्तै, सुक्खा वातावरणमा बस्दा पनि कपालमा चा’या पर्ने समस्या हुन्छ । लामो समयदेखिको तनाव, थकान, चिन्ता, र टाउकोमा हुने ए’लर्जीका कारण पनि चा’या पर्ने समस्या हुन्छ ।
प्रायः कपाल नकोर्ने, टाउको ननुहाउने, फुस्रो छाला भएका, चिसो मौसममा कोठा न्यानो पारेर बस्ने, बढी नुनिलो, गुलियो र मसालेदार खाना खाने तथा रक्सी सेवन गर्ने हरुमा चाया पर्ने सम्भावना बढी हुन्छ । जाडो मौसममा टाउकोबाट टोपी नझिक्ने, कम नुहाउनेहरुलाई चायाले उस्तै खेदो खन्छ ।यस्तै, हृ’दयघा’त र मस्ति’ष्कघातबाट तंग्रिन लागेका बिरामी, जिंक तथा भिटामिनको कमी भएका, मान’सिक तनाव भएका मानिसलाई पनि चा’याले सताउँछ ।
उपचार १. कागती कागतीलाई २ टुक्रा बनाउनुहोस् र एकचोटिमा एउटा टुक्राले आफ्नो ता’लुमा १० मिनेटसम्म मसाज गर्नुहोस्। मसाज गरिसकेपछि स्याम्पूले टाउको पखाल्नुहोस्। यो विधि १ हप्तासम्म नियमित अपनाउनाले चा’याबाट छुट्कारा पाउन सकिन्छ। आफ्नो कपाललाई चाहिने जति नरीवलको तेल अथवा तोरीको तेल लिनुहोस् र त्यसमा ४/५ थोपा कागतीको रस मिसाएर घोल्नुहोस्। त्यो मिश्रणले ता’लुमा मसाज गर्नुहोस्। यसले चा’याको pH लेभललाई नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्दछ । कागतीलाई दिनभरी घाममा सुकाउनुहोस् र त्यसलाई नरीवलको तेलमा मिसाएर ता’लुको मसाज गर्नाले पनि चा’याबाट छुट्कारा पाउन सकिन्छ।
२. दही यदि तपाईँको कपाल चिल्लो छ (oily hair) र चा’या पनि चिल्लो छ भने कागती लगाउनु उचित हुँदैन। बरु त्यसको सट्टा दही लगाउनुहोस्। दहीले चा’या परेको ता’लुमा १० मिनेटजति मसाज गर्नुहोस् र पछि स्याम्पूले पखाल्नुहोस्। ३. अदुवा यदि तपाईँको कपालमा रङ्ग लगाउनुभएको छ र चा’या परेको छ भने कागती र दही लगाउँदा कपालको रङ्ग उँड्न सक्छ। त्यसैले यस्तो बेलामा अदुवाको जुसले ता’लुको मसाज गर्नुहोस्। १ हप्तासम्म नियमित अदुवाको जुसले ता’लुको मसाज गर्नाले चा’यालाई सखाप पार्न सकिन्छ। ४. सखरखण्ड जसरी अदुवाको जुसले रङ्ग लगाएको कपालबाट चा’या हटाउँछ, त्यसरी नै सखरखण्डको जुस पनि रङ्ग लगाएको कपालको लागि फाइदाजनक हुन्छ। यसले pH लेभललाई नियन्त्रण राख्नमा मद्दत गर्नुको साथै, कपालको रङ्गलाई समेत कुनै असर पुर्याउँदैन।
५. घिउकुमारी घिउकुमारीले पोलेको अनि काटेको घा’उलाई निको पार्छ भन्ने त सायद सबैलाई थाहा नै छ होला। तर यो बहुउपयोगी आयुर्वेदिक जडिबुटीले कपालको चा’या हटाउनमा समेत उत्तिकै महत्वपूर्ण भूमीका खेल्दछ। दैनिक १ हप्तासम्म घिउकुमारीको जेलले ता’लुको मसाज गर्नाले चा’याको थप उत्पादन हुन सक्दैन। ६. जीरा जीरालाई मसिनो गरी पिनेर मनतातो पानीसँग मिसाई लेदो बनाएर ता’लुमा लगाउँदा पनि चा’याबाट छुट्कारा पाउन सकिन्छ। राति सुत्नेबेला जीराको लेदो ता’लुका लगाउनुहोस् र विहान उठेर त्यसलाई स्याम्पूले पखाल्नुहोस्।
नुहाएपछि छाला फुस्रो हुने समस्याबाट हैरान हुनुहुन्छ ? यसो गर्नुहोस् तपाइहरूलाई आँफ्नो स्किनलाई कसरी केयर गर्न सकिन्छ भन्ने चिन्ता बढी रहेको हुनसक्छ । तपाँईलाई त्यस्तो चिन्ता लागेको छ भने अब बिभिन्न घरेलु उपाएबाट पनि तपाईले आँफ्नो स्किनलाई केयर राख्न सक्नु हुनेछ । जसको लागि तपाँईले बिभिन्न उपाए अपनाउदा समधानका लागि स्वंयमले सजकता अपनाउनुपर्ने देखिन्छ । छालालाई कसरी बचाउने ? नुहाउँदा तातो पानी प्रयोग नगर्ने तातो पानीले शरीरमा हुने प्राकृतिक तेल नाश गरेर छाला रुखो बनाउँछ । चिसो मौसममा तातो पानीले नुहाउन सजिलो भएपनि यसले छालालाई रुखो तथा फुस्रो बनाउँछ । मस्चराइजर लगाउने छाला स्व’स्थ राख्ने हो भने नुहाएलगत्तै मस्चराइजर लगाउनु जरुरी छ । नुहाएपछि पूरै शरीरमा मस्चराइजर गर्नुपर्छ । पहिलोपटक लगाएको एक घन्टापछि पनि छालामा रुखोपन देखियो भने दोस्रोपटक मस्चराइजर लगाउनुपर्छ । पानीमा तेलको मिश्रण नुहाउनुअघि पानीमा जैतुन या बदामको तेलका केही थोपा राख्दा राम्रो हुन्छ । यसले छाला नरम बनाएर राख्छ ।
बास्नादार साबुन प्रयोग साबुन जति बास्नादार हुन्छ उति नै केमिकल मिसाइएको छ भन्ने जान्दा हुन्छ । केमिकलयुक्त साबुनले छाला रुखो बनाउँछ । साबुन प्रयोग नै गर्ने भए घ्युकुमारी र निमबाट बनेको रोेज्दा अति उत्तम देखिन्छ । हनी प्याकको प्रयोग मह छालाका लागि निकै नै उपयोगी चिज हो । मह र दहीको प्याक बनाएर पूरै शरीरमा लगाउने र सुकेपछि नुहाउँदा छाला रुखो बन्दैन । तीन हप्तामा एकपटक यसो गर्दा सकारात्मक परिणाम आउँछ । छालालाई स्व’स्थ कसरी राख्ने ? छालालाई कसरी राम्रो देखाउने वा स्व’स्थ कसरी राख्ने भन्ने बारेमा धेरैले अनेक थरि उपाय गरिरहेता पनि केही यस्ता सामान्य तरिका साथै घरमा सधैजस्तो प्रयोग भइरहने सामान अनि खानेकुराहरु प्रयोग गरेर पनि छालालाई राम्रो अवस्थामा राख्न सकिन्छ । छालाको गोरोपनको साथै चमक ल्याउन भिटामिनहरु र पानीको प्रशस्त सेवन जरुरी हुन्छ। सकेसम्म सुर्यको प्रकाशबाट बचाउने गर्नुपर्छ संवेदनशील छालालाई ।
के के गर्ने छालाको गुणस्तर कायम राख्न ? हेर्नुहोस केही टिप्सहरु देशी बदामको तेल छाला सुक्खा हुने, फुस्रो हुने, चिलाउने, जलन हुने भएमा देशी बदाम को तेल लगाउने गर्नुस् । यसले तपाईंलाई समस्याबाट मुक्त हुन मद्दत गर्छ । यसको प्रयोगले छालालाई आवश्यक पर्ने चिसोपन प्रदान गरी सुक्खा हुनबाट बचाउँछ । देशी बदामबाट छालालाई आवश्यक पर्ने पौष्टिक तत्त्व प्राप्त हुन्छ र छाला ताजा, चम्किलो, स्व’स्थ एवम् नरम हुन्छ । लिप बाममा कोको–नौनी प्रायजसो बडी लोसन तथा लिप बाममा कोको–नौनी प्रयोगमा ल्याएको पाइन्छ । यो लगाउने गर्नाले फुटेको छालालाई धेरै फाइदा दिन्छ । साथै सुक्खा छालालाई पनि सुक्खा हुनबाट बचाइराख्छ । कोको–नौनीमा एन्टिअक्सिडेन्टको गुण भएकाले छालालाई चिसोपन बनाई नरम राख्न पनि मद्दत गर्छ । सूर्यमुखी तेल सूर्यमुखी तेलमा भिटामिन ए, बी, सी,डी र ई प्रशस्त हुन्छ । त्यसैले छालामा यसको प्रयोग गर्नाले सुकेको तथा बिग्रेको छालामा सुधार हुन्छ । अनि नरम, कलिलो र चिसोपना गराइराख्न सहयोग गर्छ । यो तेल स्वास्थ्यवद्र्धक पनि हो ।
नीमको तेल नीम एक बहुउपयोगी रुख हो । यो रुखका प्रत्येक भाग विभिन्न प्रयोजनका लागि उपयोगी हुन्छ । स्वास्थ्योपचारमा, खेतीपातीमा, सौन्दर्य सामग्रीहरुमा यसको धेरै उपयोग हुने गरेको पाइन्छ । शरीर चिलाउने र छालामा रातो–रातो देखा पर्नेहरुका लागि यो तेलको सेवन प्रभावकारी मानिन्छ । चाउरीपन हटाउने कार्यका लागि पनि यो तेल सेवन गर्नु बडो प्रभावकारी देखिएको छ । यसमा एन्टिसेप्टिक गुण पनि छ । सुक्खा छालालाई चिसो गरिराख्न धेरै मद्दत गर्छ । काँक्रो काँक्रो स्वास्थ्यका लागि धेरै लाभदायी रहेको अनुसन्धानको सिलसिलामा प्रमाणित भइसकेको छ । यो खानको लागि मात्र नभई सौन्दर्य बढाउनमा पनि विशेष उपयोगी देखिएको छ । काँक्रोको सेवनले छालालाई चिसोपन र ताजा बनाइराख्न मद्दत पुर्याउँछ । यसको प्रयोग अनुहारको छालामा पनि गर्न सकिन्छ । बिग्रेका छालालाई स्व’स्थ बनाउन पनि काँक्रो सहयोगी हुन्छ । घिउकुमारी आजकल घिउकुमारीका बारे निकै चर्चा हुने गरेको छ । यसमा हुने बहुउपयोगी गुणका कारण स्वास्थ्य र सौन्दर्य क्षेत्रमा यसको धेरै प्रयोग हुन्छ । यसलाई छालामा प्रयोग गर्दा छाला नरम पार्छ, सुक्खा हुन दिँदैन र प्राकृतिक हानिकारक अल्ट्राभायोलेट किरणबाट बचाइराख्ने गर्छ ।
फर्सीको बियाँ फर्सीको बियाँको तेलमा फ्याट्टी एसिड, जिङ्क, भिटामिन ‘ई’ र बेटा क्यारोटिन प्रशस्त पाइन्छ । त्यसैले यसको तेल सेवन गर्ने गरेमा छाला सुक्खा हुन दिँदैन र छालामा भएको चिसोपनलाई कायम राख्ने काम गर्छ । यसले गर्दा छाला नरम, ताजा तथा कलिलो देखिने हुन्छ । तेल मात्र नभएर फर्सीको बियाँ नै खानु पनि सौन्दर्यका दृष्टिले राम्रो मानिन्छ । अंगुरको तेल अंगुरको बियाँको तेल ९न्चबउभ यष्०ि मा ब्कतचष्लनभलत को गुण भएकोले छाला झुल्न नदिई तन्काइराख्ने काम गर्छ । यो तेल सेवन गर्ने र छालामा लगाउने गर्दा छाला कसिलो हुन्छ । यसले छालामा भएको चिसोपनलाई सञ्चित गरिराख्ने भएकाले छाला सुक्न दिँदैन । छाला सुक्खा भएन भने कोमल र ताजा देखिन्छ ।
जाडाे लाग्दैछ बाँसकाे ता’मा किन र कसरी खानै पर्ने ?
महिला पुरुष दुवैमा किन झ’र्छ कपाल ? यस्ता घरेलु उ’पायले कम गर्न भने सकि’ने रहेछ